အမေဇုံစပိန်မှ ၀ န်ထမ်းများသပိတ်မှောက်သည် Gadget သတင်း
၈၂၅ Amazon စပိန် ၀ န်ထမ်းများသည်သဘောတူညီချက်အသစ်အတွက်သပိတ်မှောက်ခြင်းဖြစ်သည်
Eder Esteban | | အမေဇုံ, ယေဘုယျ, NOTICIAS
စပိန်နိုင်ငံရှိပထမ ဦး ဆုံးအမေဇုံစင်တာတွင်ဝန်ထမ်း ၈၂၅ ဦး ရှိသည် (စန်းဖာနန်ဒိုဒီနာနာရက်စ်၊ မက်ဒရစ်) လုပ်ကြံကြပြီ။ ကြာသပတေးနေ့တွင်အထွေထွေညီလာခံကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးသောကြာနေ့အစောပိုင်းအချိန်တွင်သပိတ်မှောက်ရန်တောင်းဆိုမှုကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်မတိုင်မီဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် စုပေါင်းသဘောတူညီချက်အားသက်တမ်းတိုးရန် Amazon ၏ငြင်းဆန်မှု.
ထို့အပြင်စက်ရုံအလုပ်သမားများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကိုလျှော့ချရန်ကုမ္ပဏီ၏အဆိုပြုချက်မှာအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း, လုပ်သားအင်အား၏ ၇၄% သည်ဤမဲပေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်သူတို့ထဲကလေးပုံသုံးပုံသပိတ်၏မျက်နှာသာအတွက်မဲပေးကြသည်။
ကုမ္ပဏီကော်မတီသည်အလုပ်သမားများ၏မဲအရေအတွက်အပြီးတွင်ရက်စွဲများကိုသတ်မှတ်နိုင်ရန်တွေ့ဆုံခဲ့သည် သောသပိတ်မှောက်ရာအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်တွင်အဘို့အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ရက်စွဲကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်ပေမယ့်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မကြာခင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆကြသည်။
တင်းပလိတ်ကငြင်းခုန်သည် အမေဇုံသည်အလုပ်သမားသဘောတူညီချက်ကိုသက်တမ်းတိုးရန်ငြင်းဆန်သောကြောင့်၎င်းသည်သပိတ်မှောက်ခြင်းဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီ၏၎င်း၏လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးသောရည်ရွယ်ချက်အပြင်။ အဖြစ်မှန်ကကတည်းကအဝေးကနေလာမယ့်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည် အဆိုပါသဘောတူညီချက်ဒီဇင်ဘာလ 31, 2016 ရက်တွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံး။ ထို နေ့မှစ၍ အသစ်တစ်ခုကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ ဒီစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘဲလျက်ရှိသော်လည်း။
ပြည်ထောင်စုခေါင်းဆောင်များကအမေဇုန်ကစင်တာ၏အခြေအနေကိုလေးစားရန်ကတိပေးခဲ့သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် အသစ်ကသဘောတူညီချက်၌တည်၏။ သို့သော်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုစတင်သည့်အချိန်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စင်တာရှိလက်ရှိအလုပ်သမားများ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အဲဒါပုံရသည် အဓိကဖြတ်တောက်မှုသည် ၀ န်ထမ်းလစာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဓိကဖြစ်ခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအမျိုးအစားများအထူးကုများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လည်းဖော်ပြလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် အချိန်ပို၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချ.
ပaိပက္ခဖြစ်ပုံရသည့်နောက်ရှုထောင့်တစ်ခုမှာကုမ္ပဏီမှဖျားနာခွင့်အတွက်ကာကွယ်မှုကိုလျှော့ချလိုခြင်းဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင်အလုပ်သမားများသည်လစာ၏ ၁၀၀% ကိုပထမဆုံးခွင့်ရက်တွင်လက်ခံရရှိသည် ကြွင်းသောအရာတွင်စတုတ္ထနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။ အမေဇုံမှကာကွယ်မှုကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချလိုသည်.
ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့သည်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ အလုပ်သမားအများအပြားကဤသပိတ်မှောက်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းကြောင့်ပြည်ထောင်စုခေါင်းဆောင်များအဆိုအရ Amazon သည်၎င်းစွပ်စွဲချက်များမှမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ပြီးအလုပ်သမားများနှင့်ဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်.
ယခုအချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ဤသပိတ်မှောက်မှုအားမည်သည့်အချိန်၌ခေါ်မည်ကိုမသိရသေးပါ။ နောင်လာမည့်နေ့များတွင်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကြားသဘောတူညီမှုတစ်ခုရရှိရန်အတွက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအသစ်များပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ပြproblemနာဖြစ်နိုင်တယ် ၎င်းသည်စပိန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးစင်တာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏သပိတ်မှောက်မှုကာလအတွင်း၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌ဖြစ်ပျက်မှအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ၈၂၅ Amazon စပိန် ၀ န်ထမ်းများသည်သဘောတူညီချက်အသစ်အတွက်သပိတ်မှောက်ခြင်းဖြစ်သည်
David Kasio Calvo Olivares ဟုသူကပြောသည်
David Kasio Calvo Olivares အားပြန်ပြောပါ